Uwavula kanjani amafayela we-.MHT (okokufundisa okuyizinyathelo ezintathu) | Kusuka kuLinux
Uwavula kanjani amafayela we-MHT (okokufundisa okuyizinyathelo ezintathu)
Nginomkhuba wokonga okokufundisa okuningi engikuthola enetheni, ezindabeni, kunoma iyiphi i-athikili engiyibona ithakazelisa, futhi ngale ndlela kamuva lapho nginemibuzo / izinkinga, ngingaxhumana nabafundisi, njll.
Iphuzu ukuthi ngiyabasindisa, kepha hhayi njengoba kwenziwa ngokujwayelekile ... ngihlala ngisebenzisa ifomethi I-MHT. Ngikwenza kanjena ngoba kuyangikhathaza impela (nokuningi) ukuthi ifayela lelo .HTML bese kuba nefolda enezithombe, ukuthi ifolda iphezulu nefayela le- .HTML ekugcineni noma ekugcineni komkhombandlela angiwuthandi. Lapho uzigcina zingena ku- I-MHT kugcinwa ifayili elilodwa eliqukethe konke, kukhona konke okuhle futhi ndawonye hehe.
Kepha, ake sibone imininingwane ethe xaxa ukuthi yini i-MHT:
(MIME HTML - Multipurpose Internet Mail Extension HTML noma I-MHT). Okujwayelekile okufaka kuzisetshenziswa zedokhumenti ngokuvamile ezixhunyaniswa ngaphandle. Lezi zinsiza zingaba archives izithombe noma imisindo. Lokhu kusho ukuthi kufayela elifanayo lapho kutholakala khona ikhodi ye-HTML, i- archives idatha efakwe ikhodi kusetshenziswa i-MIME.
1. Into yokuqala, kufanele sifake iFirefox, uma kungenzeka singayifaki. Chofoza LAPHA uma bengenaso isiphequluli seFirefox.
2. Manje, sivula isixhumanisi esilandelayo, sizofaka isengezo ngokuzenzakalela:
Lokhu kuzovula ibhokisi elilandelayo:
Kufanele silinde cishe imizuzwana emi-4 noma emi-5 kuze kube yilapho inkinobho engiyikhombisayo (Faka manje) isebenza, uma nje singachofoza kuyo siyayenza futhi voila, i-plugin izofakwa.
3. Ake siqale kabusha iFirefox.
Silungile, sesivele sine-addon edingekayo (i-addon, i-plugin, eyengeziwe) efakiwe ukuvula .MHT ngeFirefox.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Uwavula kanjani amafayela we-MHT (okokufundisa okuyizinyathelo ezintathu)
Futhi ukuyigcina njengeyiqiniso, kuhle kakhulu, empeleni ikwenzile lokho, kepha ezinye iziphequluli azizange ziyivule, futhi igcine kuphela ikhasi nefolda yayo, kepha uqinisile, iyacasula futhi ayizizwa kahle, futhi kwesinye isikhathi izinto ziyashoda ekhasini.
Ngiyabonga mngani idatha enhle kakhulu, ngingumlandeli wokugcina okokufundisa nezihloko,
Ifakiwe futhi isebenza kahle, iqinisekisa ukuthi umuhle.
Kuyinjabulo ukusiza 😀
Uxolo ngokungalungile okungakubangela, ngeke ube nesifundo sokufaka i-firewall ye-KDE ku-Debian?
Bheka ukubona lokhu okusezingeni lohlelo:
Ngiyabonga Isibindi, ngizobona ukuthi ngingakwazi yini ukuyifaka ku-Debian.
UGracia Gaara, ichopho langisiza kakhulu, ngahamba kuwo wonke amakhasi ngabaqondisi engangikulande kule fomethi futhi konke kuhleleke kakhulu. Manje ngicabanga ukuguqula yonke into ibe yi-pdf ukuze isebenzisane kakhulu.
IGnome-Shell itholakala ku-LMDE
IGnome-Shell iyatholakala ekuhlolweni kwe-Debian